Coinbase weputara Dogecoin na $ 1.2 nde inye ego dika onu ahia dara
a Coinbase amalitela ịzụ ahịa Dogecoin.
Na mbụ n'ọnwa gara aga, Brian Armstrong, Coinbase CEO kwupụtara
Na mmemme ọhụụ, Coinbase depụtara aha ndị Dogecoin. Dịka akụkụ nke mmalite ahụ, Coinbase na-enyefe ndị ahịa ihe $ 1.2 nde.
N’ọnwa June 3, a na-enyefe nnyefe nke si Doge ka Coinbase Pr o.
Dị ka Coinbase , ahia na Doge-USD, Doge-BTC, Doge-EUR, Doge-USDT na Doge-GBP na-amalite n'usoro atọ kemgbe ọkọnọ ezuola n’elu ikpo okwu. Usorobụ naanị post-only, limit-only and full-trading.
Armstrong gosipụtara na mbụ na ịgbakwunye akụ bụ ihe kacha mkpa maka Coinbase. Maka nke a, ha na-agba mbọ imezi ngwa ngwa ngwa ahịa dị n'elu ikpo okwu. O kwetara na o were oge iji soro ọtụtụ akụ agbakwunyere kwa ụbọchị na akụ na ụba crypto.
Otu esi abanye asọmpi ahụ
Iji nwee ohere nke mmeri, ndị sonyere ga-ebu ụzọ zụta ma ọ bụ ree $ 100 nke Dogecoin na Coinbase tupu June 6 2021. The onye mbu ga - enweta $ 300,000 site na Doge. Na mgbakwunye, ndị mmeri 10 ọzọ ga-anata $ 30,000 n'aka Doge, mgbe ahụ ndị mmeri 6,000 ga-enwetakwa $ 100 n'aka Doge ọ bụla. A ga-akpọtụrụ ndị mmeri site na June 17th. Asọmpi a nwere naanị otu ntinye mmadụ n’otu. Otutu ntinye agaghị eme ka nsogbu nke mmeri dịka Coinbase si dị.
e Coinbase.com gbanwere. awa. Otu ọ dị, ọnụahịa ahụ dara 13% site na ụbọchị ọ bụla iji zụọ ahịa na $ 0,36. Fọdụ ndị na-etinye ego ka na-ama jijiji na Doge.
Ọnụahịa azụmaahịa na-agbadata 28% n'ime awa 24 gara aga na njikwa ahịa nke 2.8%.